शेरबहादुर देउवा : दिनभर दौडधुप साँझ शिथिल
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत नपुग्ने अवस्थापछि नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकार दाबी गर्नबाट ‘ब्याक’ भएको छ। लामो कसरत र प्रयासपछि आफ्नो पक्षमा संख्या जुटाउन नसकेपछि कांग्रेस बहुमतको वैकल्पिक सरकार दाबी गर्नबाट पछि हटेको हो।
कांग्रेसले गत २७ बैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकारमाथि दाबी गर्ने भन्दै विपक्षी दलसँग सघन छलफल अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा विपक्षमा नै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन पाए पनि जनता समाजवादी पार्टीको सिंगो समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस सरकार दाबीबाट पछि हटेको हो।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको मात्रै संख्याले बहुमत नपुग्ने अवस्था भएको र जसपाले साथ नदिएपछि सरकारमाथि दाबी गर्ने अवस्था नरहेको बताए। कांग्रेसलाई जसपाभित्रको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले भने वैकल्पिक सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए।
तर, बिहीबार दिनभर एमालेकै माधव नेपाल समूहको निर्णयसमेत कुरेको कांग्रेसले सो समूहको राजीनामा नआउने अवस्था विकसित भएपछि सरकार दाबी प्रयासबाट पछि हटेको हो। कांग्रेसले अन्तिम अवस्थामा पनि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसँग छलफल ग¥यो। तर, उनीहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि तयार नभएपछि सभापति देउवाले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नै निवास बोलाएर अवस्थाबारे जानकारी दिए।
देउवाले बिहीबार साँझ नै पदाधिकारी बैठक बोलाएर अवस्थाबारे जानकारी गराए। त्यसक्रममा उनले सरकारमाथि दाबी गर्ने अवस्था नबनेको ‘ ब्रिफिङ’ नेतासमक्ष गरे। कांग्रेस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै पुग्ने पक्का भएको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत सोमबार राति नै आह्वान भइसकेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतीय आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि आहवान गरेकी थिइन्। सो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पु¥याएको अवस्थामा सरकारमाथि दाबी गर्न सक्छन्। यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा भने जसपाको ठाकुर र महतो समूह तटस्थ बसेको थियो। राजधानी दैनिकबाट
एक करोड डोज खोप ल्याउने कुरा भाषणमै सीमित
झलनाथ खनालको नाममा उठाइएको झमेलाले नेपाल पक्षमा तरंग
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
‘सामाजिक कार्यमा ग्लोबल आइएमई बैंकको बलियो साथ’
यी हुन् ग्लोबल आइएमई बैंकका आकर्षक २० बचत सेवा
चुरे उत्खनन् र निकासीविरुद्धकाे रिटमा आज संवैधानिक इजालसमा सुनुवाई हुँदै
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने
सुनकाे मूल्य १२ सयले घट्याे, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकाे एजीएम आज, आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने
नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई एक्वायर गर्दै
नेता खनाललाई भेट्न नर्भिक पुगे ईश्वर पोखरेल
महानगर मेयर दाहालद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन
मेलम्चीको होटलमा फसेका २ सहित ९ को उद्धार : घाइते चारलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो
स्याङ्जाको सेतीवेणी बजार डुबानमा : ८ घरमा क्षति
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो
उपचारका लागि नेता खनाल भारत प्रस्थान
दिल्ली जानुअघि खनालले भनेः व्यक्तिगत इगो त्यागौं, पार्टी फुटबाट जोगाऔं
मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार विश्वासको मत लिने